Iindaba-Umxholo weGanoderma lucidum
Umongo weGanoderma lucidum
Ukuthetha nge-ganoderma, kufuneka ukuba siyivile.I-Ganoderma lucidum, enye yamayeza asithoba, sele isetyenzisiwe ngaphezulu kweminyaka engama-6 800 e-China. Imisebenzi yayo efana "nokuqinisa umzimba", "ukungena kumalungu amahlanu e-zang", "ukuthomalalisa umoya", "ukukhulula ukukhwehlela", "ukunceda intliziyo kunye nokugcwalisa imithambo", "ukuxhamla umoya" kubhalwe kwi-Shennong Materia IMedica Classic, "Ukuhlanganiswa kweMeria yeMedica" kunye nezinye iincwadi zonyango.
“Izifundo zonyango zale mihla kunye nezeklinikhi zikwangqina ukuba imbewu yeGanoderma lucidum spores ityebile kwi-polysaccharides ekrwada, i-triterpenoids, i-alkaloids, iivithamini, njl. Njl. Ganoderma lucidum, kwaye uneziphumo ezingcono ekuphuculeni ukhuseleko kunye nokomeleza umzimba. Nangona kunjalo, indawo engaphezulu kwesiporho seGanoderma lucidum ineqokobhe elinzima le-chitin ephindwe kabini, enganyibilikiyo emanzini kwaye kunzima ukuyinyibilikisa kwiasidi. Izinto ezisebenzayo eziqulathe umgubo wespore zonke zisongelwe kuwo. I-powder spore engapheliyo kunzima ukufunxwa ngumzimba womntu. Ukuze usebenzise ngokupheleleyo izinto ezifanelekileyo kwiGanoderma lucidum spores, kufuneka uqhekeze kwaye ususe udonga lweGanoderma lucidum spores.
I-Ganoderma lucidum spore powder iyajijisa ubunjani beGanoderma lucidum, enayo yonke imathiriyeli yemfuza kunye nomsebenzi wezempilo weGanoderma lucidum. Ukongeza kwi-triterpenoids, i-polysaccharides kunye nezinye izondlo, ikwaqulathe i-adenine nucleoside, i-choline, i-palmitic acid, i-amino acid, i-tetracosane, i-vitamin, i-selenium, i-organic germanium kunye nezinye izakha mzimba. Kufunyenwe ukuba i-Ganoderma lucidum spores inokuqinisa ukhuseleko, ikhusele ukwenzakala kwesibindi kunye nokukhusela imitha. ”
“I-Ganoderma lucidum spore powder inokuphucula ukusebenza kwamajoni omzimba kunye ne-humoral, ikhuthaze ukwanda kweeseli ezimhlophe zegazi, yonyuse umxholo we-immunoglobulin kwaye iyancedisa, ikhuthaze ukuveliswa kwe-interferon, isebenze ukusebenza kweeseli zemvelo zokubulala kunye nee-macrophages, kwaye yenze ngcono ubunzima be-thymus, i-spleen kunye nesibindi samalungu omzimba, ukwenzela ukuphucula amandla okulwa ne-tumor emzimbeni womntu kwizifo ezahlukahlukeneyo.
I-Ganoderma lucidum spores zityebile kwi-protein (18.53%) kunye nee-amino acid ezahlukeneyo (6.1%). Kwakhona iqulethe polysaccharides, terpenes, alkaloids, iivithamini kunye nezinye izinto. Iindidi kunye nemixholo yamacandelo asebenzayo aphezulu kunezo zeGanoderma lucidum body kunye ne-mycelium. Umsebenzi wayo ikakhulu unxulumene nezi zinto zilandelayo:
1. I-Triterpenoids: ngaphezulu kwe-100 triterpenoids ibekelwe bucala, phakathi kwayo i-ganoderic acid yeyona iphambili. I-Ganoderma acid inokuthomalalisa iintlungu, ukuzola, ukuthintela ukukhutshwa kwe-histamine, anti-inflammatory, anti-allergic, detoxification, protection kwesibindi kunye nezinye iziphumo.
2. I-Ganoderma lucidum polysaccharide: imisebenzi eyahlukeneyo ye-pharmacological yeGanoderma lucidum ikakhulu inxulumene ne-ganoderma lucidum polysaccharides. Ngaphezulu kwama-polysaccharides angama-200 abekelwe bucala kwiGanoderma lucidum. Kwelinye icala, i-Ganoderma lucidum polysaccharide inefuthe ngqo kwiiseli zomzimba, kwelinye icala, inokufezekiswa ngokudibana kwe-neuroendocrine immune system.
Umzekelo, iGanoderma lucidum ibuyisela imeko yokungasebenzi komzimba kwizilwanyana okubangelwa kukuguga okanye uxinzelelo, ngaphandle kwempembelelo yayo ngqo kumajoni omzimba, kusenokubakho neendlela ze-neuroendocrine ezichaphazelekayo. I-Ganoderma lucidum polysaccharides inokugcina ukumelana komzimba kunye nokuphucula ukumelana nezifo komzimba ngokuchaphazela ngokuthe ngqo nangokungathanga ngqo kwinkqubo yamajoni omzimba. Ke ngoko, isiphumo se-immunomodulatory of Ganoderma lucidum polysaccharide yinxalenye ebalulekileyo "yokomeleza umzimba kunye nokomeleza isiseko".
3. I-Organic germanium: umxholo we-germanium kwi-Ganoderma lucidum ingama-4-6 amaxesha e-ginseng. Inokuphucula ngokufanelekileyo ukubonelelwa kweoksijini yegazi lomntu, ukukhuthaza ukutya okuqhelekileyo kwegazi, ukuphelisa ii-radicals simahla emzimbeni nokukhusela ukuguga kweseli.
4. I-Adenine nucleoside: IGanoderma lucidum iqulethe iintlobo zezinto ezivela kwi-adenosine, ezinemisebenzi eyomeleleyo yamayeza, inokunciphisa i-viscosity yegazi, inhibit iplatelet aggregation kwi-vivo, yonyusa umxholo we-hemoglobin kunye ne-glycerin diphosphate, kunye nokuphucula amandla e-oksijini egazi entliziyweni kunye nengqondo; I-Adenine kunye ne-adenine nucleoside inezinto ezisebenzayo ze-sedation kunye nokunciphisa ukudityaniswa kweplatelet. Banesakhono sokuthintela ukudityaniswa kweeplatelets, kwaye badlale indima entle kakhulu ekuthinteleni i-cerebral vascular embolism kunye ne-myocardial infarction.
5. Landela umkhondo: IGanoderma lucidum ityebile ngeselenium nakwezinye izinto ezilandelwayo eziyimfuneko emzimbeni womntu. ”